Maitiro ekunakidzwa neIOS 10.2 emoji pane iOS 9 [Jailbreak] | IPhone nhau
Pablo Aparicio | | Cydia, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Imwe ye (mashoma) zvitsva zvakauya pamwe nekumisikidzwa kwe iOS 10.2 vaive akanaka ruoko emoji nyowani, pakati payo mukufunga kwangu inomira paella (ine pizi ...), iyo pinocchio kana murevi wenhema, murume ari kutamba uye kuseka nechiso chake chakakotama. Kuva nedzimwe nzira dzekuzviratidza pachako kunogara kuri chinhu chakanaka, asi dambudziko nderekuti kushandisa pakiti idzva remifananidzo iyi unowanzo fanirwa kuisa vhezheni itsva yeIOS. Kana kuti hazvina basa here?
Hongu kwete, hazviwanzo kudikanwa kuti uvandudze kuti ushandise izvo zvitsva zveimwe yazvino vhezheni yeApp Ichi chinhu chinoshandiswa nevashandisi ve jailbreak uye, sekuratidzwa kuri kuitwa muridzi wenyaya ino, iyi posvo inoitirwa vashandisi vane yavo iPhone, iPod Touch kana iPad "vakapunyuka kubva mutirongo", mu imwe vhezheni yeIOS 9 uye unoda kushandisa iyo nyowani "Emoticons" yakauya kuIOS nekuburitswa kweIOS 10.2. Pano tinotsanangura kuti tingaiwane sei.
Maitiro ekuisa iOS 10.2 emoji pane iOS 9.x
Isu tinovhura Cydia.
Isu tinoenda kune iyo Source tab.
Tinobaya Hora uyezve pa Wedzera. Tinofanirwa kuita izvi kaviri kuwedzera anotevera marekodhi.
Kana tisina kuzviisa, takatsvaga BytaFont 3 ndokuiisa. Iyo iri muModMyi repository iyo yakaiswa nekumisikidza muCydia.
Heano maitiro maviri:
Kana isu tine iOS vhezheni kubva kuIOS 9.0 kuenda kuIOS 9.1 (inosanganisirwa), isu tichawana nekuisa anotevera mapakeji (matatu ekupedzisira anofanira kuongororwa otomatiki kana uchiisa yekutanga. Kana zvisiri, tichavaisa nemaoko):
Emoji10 (iOS 9.0-9.3), kubva kuPoomsmart repo
Emoji iOS 10, kubva ku vxBakerxv repo
EmojiAttribute, kubva kuPoomsmart repo
EmojiLocalization, kubva kuPoomsmart repo
EmojiResource, kubva kuPoomsmart repo
Kana isu tine iOS vhezheni iri pakati peIOS 9.2 uye iOS 9.3.3 (inosanganisira), isu tichaisa aya mapakeji:
Pakupera kwekumisikidza, chishandiso chinotikumbira kuti tiite yekufema. Isu tinobvuma, semazuva ese patinoisa chimwe chinhu kubva kuCydia chinotibvunza icho isu.
Tevere, tinovhura BytaFont 3.
Isu tinoenda kuSwitch Mode tab uye sarudza Emoji.
Iye zvino tinobata paEmoji10 kuti tishandure izvo zvekutanga zveiyo nyowani kubva kuIOS 10.2.
Chekupedzisira, isu tichaita kumwe kubhenekera (kutangazve kweyekutenderera kana yekumba skrini, kune avo vasingazive) kuitira kuti shanduko dziitwe. Iyo emoji nyowani ichave iri munzvimbo imwechete mavaive muIOS 9.x.
Kana isu tichida kudzosera shanduko, isu tichafanirwa kuita zvinotevera:
Isu tinovhura BytaFont 3.
Isu tinosvika Swap Mode - Emoji.
Isu takabaya paKudzorera BytaFont backup, iyo ichadzoreredza kopi yekumisikidza uye nekuisa iyo emoji yaiwanikwa muiyo iOS vhezheni yatiri kushandisa.
Isu tinosunungura mapakeji atakaisa mudanho rechishanu remutungamiri wapfuura.
Isu tinoita kupumha uye zvese zvinofanirwa kudzokera kune zvakajairwa, chimwe chinhu chinonyanya kufadza kana, nekuda kwechikonzero chero chipi zvacho, patinoona kuti kana tichishandisa izvo zvinotsanangurwa mune ino dzidziso yedu iPhone, iPod Touch kana iPad inova isina kugadzikana.
Uri kushandisa iOS 10.2 emoji pane iOS 9.x? Vanoshanda sei pane chako chishandiso?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekunakidzwa neIOS 10.2 emoji pane iOS 9 [Jailbreak]
Iwe unoziva ese maficha akauya kuMamepu neIOS 10?
Apple naFoxconn vanoronga kuvhura chirimwa chemadhora mazana manomwe emadhora kuti vagadzire muUS